I-Oogur: Yakha futhi ulandelele ama-URL womkhankaso wakho we-Google Analytics | Martech Zone
I-Oogur: Yakha futhi ulandelele ama-URL womkhankaso wakho we-Google Analytics
ULwesihlanu, February 2, 2018 ULwesihlanu, February 2, 2018 Douglas Karr
Abakhangisi benza imikhankaso ngenqwaba yeziteshi futhi cishe wonke umuntu usebenzisa i-Google Analytics kulezi zinsuku. Ngenkathi isoftware ethile njengabahlinzeki bezinsizakalo ifaka umkhondo we-URL wokulandela umkhankaso, iningi kakhulu lisalishiya kumthengisi ukuze ligcwalise izixhumanisi zalo Amapharamitha we-Google Analytics UTM.
Ukwakha izixhumanisi zomkhankaso wakho kubalulekile, ikakhulukazi manje njengoba i-Google inganikeli ngemininingwane ebalulekile kubasebenzisi be-Google abangene kunoma yiziphi izakhiwo zabo. Lokhu kwaziwa njenge isiminyaminya ngoba awukwazi ukusho ukuthi isivakashi sifike kuphi noma kanjani. Ukugwema lokhu, udinga ukufaka amapharamitha we-UTM futhi wakhe ama-URL we-Google Campaign. Uma wenza umkhankaso kuyo yonke i-imeyili, i-Facebook, i-Twitter, ukubizela esenzweni, izikhangiso, nezinye iziteshi… udinga yakha ama-URL omkhankaso wakho ngamunye ngokwesibonelo ngasinye. Kuyakhathaza futhi kudla isikhathi. Kuze kube manje…
I-Oogur yakha wonke ama-URL wakho womkhankaso we-Google kusixhumi esibonakalayo esisodwa, esinobungane. Nge-Oogur, unga:
Yakha - Sebenzisa umakhi we-oogur URL ukwakha ama-URL amakwe ngamapharamitha we-UTM angaguquki.
ithrekhi - Landela wonke amapharamitha we-UTM nama-URL akhiwe endaweni eyodwa - hhayi ispredishithi.
Umbiko - Thola ukuqonda okukhulu kwedatha yomkhankaso ku-Google Analytics ngokunciphisa inani lethrafikhi emnyama emibikweni.
I-Oogur ithatha inqubo ebambekayo, eyinkimbinkimbi yokwakha izixhumanisi ezingalandeleka futhi ikwenze kube lula kakhulu. Njengomakethi wedijithali, i-oogur ingivumela ukuthi ngonge ama-URL womkhankaso wokwakha isikhathi ngesikali esikhulu, esikhulu. Umphumela wokugcina ukuhamba okuhlelekile nokusebenzayo okwenza kube lula ukubona ukuthi yiluphi uhlobo lokuqukethwe olwenza kahle kakhulu. Ngingancoma kakhulu ukudubula i-oogur ”UDerek McClain, Umphathi Wezokukhangisa ngeDijithali Izixazululo Zomshayeli
Ungayisebenzisa Kanjani i-Oogur ukwakha ama-URL amaningi amakiwe ngama-UTM Parameters
Izinzuzo ze-Oogur Faka:
Gcina isikhathi esiningi ngokwakha nokuphatha ama-URL namathegi we-UTM kungxenyekazi eyodwa kunabakhi bangaphandle, amaspredishithi, nezifinyezi ze-URL
Yakha ama-URL amaningi ngasikhathi sinye
Phinda usebenzise omaki be-UTM obusebenzisa ukubika okungaguquguquki ku-Google Analytics
Uhlelo lokusebenza lwewebhu lwe-Oogur luyasebenziseka kalula, ngokungafani namaspredishithi
Imibiko Yomkhankaso We-Google Analytics iqala ukukunikeza ukuqonda okwengeziwe, okusebenzisekayo lapho usebenzisa omaki be-UTM ukukhomba imininingwane yomkhankaso kuma-URL wakho - kunciphisa inani “lomgwaqo omnyama”
I-Oogur yakhiwa ngabakhangisi babakhangisi - ithuthuka ngokuqhubekayo ukuze ibhekane nezidingo zabakhangisi
Futhi, ngokusekela i-oogur, usekela i-Business-Owned Technology Business. I-Oogur isungulwe nguNicki Laycoax, umngani wami wesikhathi eside.
Ngabantu abaningi eqenjini lethu abasebenzisa i-parameter generator, khona-ke isifinyezi kanti abanye basebenzisa ama-plugins abo we-Chrome kwaba nzima ukulandela wonke umsebenzi wethu wokwakha izixhumanisi. Ngemuva kwalokho engeza kuspredishithi ukuze ubabhale bonke, noma ngaphakathi kwesudi yokubambisana efana ne-Office365 noma i-Google Amadokhumenti, futhi inqubo ayilungile. Ukusebenza ngaphakathi kwepulatifomu eyodwa yayo yonke le misebenzi kube yinzuzo enkulu. UChris Theisen, Umphathi Wezokumaketha, I-BlueSky Digital
Ukusebenzisa I-Oogur, ukubikwa kwakho kwe-Google Analytics akuhambisani futhi kugcwaliswe ngokugcwele ngemiphumela ethuthukisiwe:
Bhalisa ngaphambi kukaFebhuwari 28, 2018, landela i- @ oogurit bese ubhala ku-tweet “UMNGANE-WE-DKNEWMEDIA”, futhi uzothola isaphulelo esingu-10% empilweni yokubhalisile!
Bhalisela Isivivinyo Samahhala!
Ukudalulwa: UDerek noChris banikezwe ukufinyelela kwamahhala ku-oogur.com njengengxenye yeqembu lomsebenzisi we-beta. Laba basebenzisi ababili basizile ekuhloleni uhlelo nasekuhlinzekeni izimpendulo ezibalulekile ukusiza iqembu ngemibono yezithuthukisi ezizokwengeza kwi-oogur ukwenza ipulatifomu ibe esebenza kahle kubakhangisi. UDerek noChris abakhokhiswanga ilayisense labo ngokushintshana ngempendulo yabo eqotho yokwabelana nabathengi abangaba njengawe.
Tags: umkhankaso womakhiisiminyaminyaI-google analyticsUmakhi womkhankaso we-google urli-ooguramapharamitha we-utm
I-Evolution of Optimization Optimization: Ngezinye Izeluleko Zamahhala ze-SEO
IPacketZoom's Mobile Expresslane CDN Ihlanganyele neAmazon Cloudfront
Nicki Mbatha (@NickiMbatha)
Feb 3, 2018 ngo-5: 14 PM
Siyabonga ngokwabelana, Doug!